Apple waxay la kulantaa dhowr podcast-yada si ay u maqasho waxa ay tabanayaan | Wararka IPhone
Qolka Ignatius | | Noticias, podcast
Sida lagu soo wariyay The New York Times, Apple waxay qabatay kulan bil ka hor lala yeeshay wakiilka ugu badan ee iTunes podcasters in la isku dayo in xal loo helo cabashooyinka ay qabaan beeshan yar. Kulankan waxaa lagu qabtay xafiisyada Apple's Cupertino waxaana lasiiyay fursad ay ku muujiyaan cabashooyinkooda, shakiga iyo talooyinka ay u jeedinayaan shaqaalaha shirkada.
Sida laga soo xigtay wargayska, podcast-yada badankood waxay muujiyeen raaxo la'aanta haysata suurtagalnimada inay dakhli ku helaan nooc ka mid ah rukunka iTunes. Ma jirto wado lagu kasbado dakhli maxaa yeelay ma jirto wado lagu ogaan karo taas oo ah dhagaystayaasha duubista iyada oo loo marayo iTunes inkasta oo Apple ay marin u leedahay xogtaas.
Dhibaato kale oo ay podcasters-ku sheegeen ayaa ah kuwa yar, oo aan ka hadal null, fursadaha lagu wadaago duubista adoo adeegsanaya iTunes. Laakiin tani waxay caan ku tahay dhammaan adeegyada ay shirkaddu na siiso, halkaasoo badhamada shabakadaha bulshada ay si muuqata uga muuqato maqnaanshahooda. Cabasho kale ayaa ah in Podcasters-ku uu ku kooban yahay la macaamilidda hal shaqaale oo ka tirsan shirkadda markasta oo ay su'aal ama dhibaato ka qabaan duubitaankooda.
Sidii caadada u ahayd, Apple uma ballan qaadin wax horumar ah 7da podcast-yada ee u yimid wicitaanka wiilasha Cupertino, in kasta oo ay xaqiiqda ahayd inay ahaayeen shaqaalaha mas'uulka ka ahaa qaybtan oo doonayey inay qabtaan kulankaas. Eddy Cue, oo madax ka ah adeegan, ma uusan soo xaadirin kulanka, laakiin shaqaalihii shirkadda ee qabtay kulanka ayaa markii dambe ku wargaliyay Cue dhammaan maaddooyinkii looga hadlay albaabada ay u xirnaayeen. Maaddaama Cue uu faallo ka bixiyay bayaannada ku xigay The New York Times:
Waxaan haynaa dad badan oo ka shaqeeya podcasting, oo ay ku jiraan injineerada, tifaftirayaasha, iyo barnaamijyada. Podcasts waxay leeyihiin boos cayiman oo Apple ah.
Waa la arki doonaa wixii horumar ah waxay hirgelin doontaa Apple kuwa ay soo bandhigeen podcasters kuwaas oo ka soo qayb galay kulanka. Waxaa laga yaabaa soo bandhigida iOS 10, Apple waxay diyaarisay wax cusub oo kuweenna ah ee naftooda u huray in la dhejiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Apple waxay la kulantaa dhowr podcastcast si ay u maqasho waxa ay tabanayaan
Lama oga: Fortune Hunter wuxuu ku dhuftey App Store